warkii.com » XOG: Lixda Arrimood Ee Muhiimka Ah Ee Real Madrid Ay Xili Ciyaareedkan Ku Gaadhay Guulaha Iyo Hadalii Barcelona Ee Beenoobay
XOG: Lixda Arrimood Ee Muhiimka Ah Ee Real Madrid Ay Xili Ciyaareedkan Ku Gaadhay Guulaha Iyo Hadalii Barcelona Ee Beenoobay
“Waxaan hubaa in Real Madrid aanay wada guuleysan doonin kulamada u hadhay” Hadalkan waxa yidhi tababaraha Barcelona ee Quique Setien, maalintii ay kooxdiisu barbarraha la gashay Sevilla, markaas oo ay lumiyeen hoggaamintoodii.
Hadalkan ayaa noqday mid beenoobay, waxaana Real Madrid ay guuleysteen sagaal ciyaarood oo xidhiidh ah oo ay dhaliyeen 17 gool, lagana dhaliiyey saddex gool oo kaliya, taas oo siisay tababare Zinedine Zidane iyo xiddigihiisa inay haddaba isku diyaariyaan koobka oo ay Khamiista ku guuleysan doonaan haddii ay ka badiyaan Villarreal ama Barcelona la qabto.
Xataa haddii ay ciyaarta Villarreal guuleysan weydo, Real Madrid waxay wali hayataa Leganes oo ay ciyaarta ugu dambaysa ee xili ciyaareedka ugu tegi doonto garoonkeeda.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa lix arrimood oo muhiim ah oo Los Blancos ka caawiyey inay gaadho guulahan, isla markaana ay ku dhaaftay Barcelona oo markii xili ciyaareedku dib u bilaabmay ka horreysay laba dhibcood:
Toddobaadyadii ugu dambeeyey, qaab ciyaareedka Real Madrid waxa ka taagnayd doodo badan. Way guuleysanayeen laakiin may ahayn qaabka ay u guuleysanayaan kuwo lagu qanci karo. Doodaha waxa sabab u ahaa saddexdii ciyaarood ee Espanyol, Getafe iyo Athletic Bilbao oo VAR ay ka caawisay guusha. Dhinaca tirooyinka, sheekooyin kala duwan ayaa jiray. Madrid waxay ciyaar walba dhinaysay 1.9 gool oo ah wax ka yar laba gool tan iyo markii kubadda cagtu ay dib u bilaabantay, laakiin iyaga ayaa laga dhalinayay 0.3 gool ciyaar walba, taas oo ah wax aad u hoosaysa, kana dhigan in toban ciyaarood ay saddex gool ka dhasheen.
Marka la eego dhinaca isku-dayga goolasha, kulan walba waxay Real Madrid goolka toogatay 15.9 jeer, halka goolkooda la toogtay 3.4 ciyaar walba.
Dhinaca kubbad haynta, waxay celcelis ahaan kulan walba ciyaarta maamulayeen 60.7%, iyagoo wada guuleystay dhamaan sagaalkii ciyaarood ee horyaalka.
Taatikada Zidane iyo ciyaartoyda badan
Zinedine Zidane waxa uu dhaqan ka dhigtay inuu ciyaartoygiisa isku beddelo, maalin walbana uu kusoo galo shax ka duwan middii hore.
Qaabka lagu yaqaanay tababaraha reer France waxay ahayd 4-3-3, laakiin si joogto ah ayuu u beddelayay. Kulankii Valencia, waxa uu kula ciyaaray 4-4-2 iyadoo uu afka hore dhigay Benzema iyo Eden Hazard. Ciyaartii kale ee Real Mallorca wuxuu kusoo galay qaab 4-2-3-1 ah, iyadoo uu afka hore ku mideeyey Gareth Bale, Hazard, Vinicius Junior iyo Karim Benzema.
Ciyaartii Granada ayuu isbeddel weyn oo kale dhacay, waxaanu ku ciyaaray 4-5-1 oo uu shan ciyaartoy oo khadka dhexe ah kusoo wada bilaabay (Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Valverde). Marka laga yimaaddo isbeddelka taatikada, waxa uu Zidane haystay ciyaartooyo badan oo uu kala doorto, waxaana uu soo xulan karayay oo inta badan beddelka ugu diyaarsanaa Vinicius, rodrygo, Aensio iyo Militao oo qaybo waaweyn kasoo qaatay sagaalka guuleed.
Goolasha oo meel walba ka imanayay
Real Madrid iskumay halayn dhaliye kaliya, waxaana ciyaartoygoodu ay wada noqdeen dhaliyeyaal uu mid walba masuuliyad iska saaray sidii uu shabaqa u taaban lahaa. 21 ciyaartoy oo kala duwan ayaa goolal u dhaliyey, waxaana ugu dakbeeyey Ferland Mendy oo kulankii Granada shabaqa soo taabtay.
Benzema oo 19 gool u dhaliyey xili ciyaareedka ayaa ugu goolal badan kooxda, waxaana ku xiga Sergio Ramos oo 10 gool ku darsaday, halka ay Kroos iyo Casemiro min afar gool dhaliyeen iyo Luka Modric oo saddex ku daray. Valverde ayaa laba gool dhaliyey, waxaana min hal gool raaciyey Isco iyo James.
Markii uu Cristiano Ronaldo ka tegay, Real Madrid waxa ka yaraaday goolashii ay dhalinayeen, laakiin si kale ayay dhibaatada u xalliyeen.
Waxay soo iibsadeen goolhaye Thibaut Courtois oo inkasta oo uu dhibaatooday xili ciyaareedkii u horreeyey, haddana noqday derbi adag oo aanay cidina goolasha sahal ku dhaafinayn. 33 ciyaarood oo horyaalka LaLiga ah oo uu xili ciyaareedkan saftay, waxa kaliya laga dhaliyey 19 gool, waxaanu u sharraxan yahay abaal-marinta goolhayaha ugu wanaagsan Spain xili ciyaareedkan.
Ramos, hoggaamiyaha xagga dambe iyo afka horeba
Shaqadiisa difaaca ayuu si wanaagsan u qabsadaa, waxaana uu afka hore ka yahay laacibka kusoo xiga Karim Benzema ee goolasha ugu badan dhaliyey.
Benzema: Goolasha iyo mucjisooyinka
Real Madrid waa in guusha horyaalka ay kaabiga u saaran tahay ay uga mahadceliso Karim Benzema oo shan gool dhaliyey intii horyaalku dib u bilaabmay. Laakiin waxa mucjiso ahayd inuu kubbado badan caawiyey.
Kulankii Alaves, wuxuu caawiye ka noqday goolkii uu dhaliyey Asensio, sidaas oo kale, waxa uu ciyaartii Espanyol cidhib ku siiyey kubadda Casemiro oo isaguna shabaqa soo taabtay.